I-annexe yengadi ene-air-con - I-Airbnb
I-annexe yengadi ene-air-con
Thatcham, England, i-United Kingdom
I-annexe yethu ilungele abantu ngabanye, imibhangqwana kanye nemindeni (enezingane). Indawo yokuhlala inombhede owodwa ophindwe kabili nosofa owodwa.Ngesikhathi se-Covid 19 iphelele njengoba ingenakho ngokuphelele isidingo sokuhlangana nathi.Ikhishi linikeza i-microwave, iketela, umshini wekhofi we-nespresso, i-toaster, ifriji kanye nazo zonke izitsha. Uzohlinzekwa, ubisi, itiye nekhofi.
I-annexe ihluke ngokuphelele endaweni enkulu futhi itholakala ngokungena kwayo.Inekhishi elincane, i-wc ehlukene kanye neshawa kagesi eshisayo. Iphinde ibe ne-air conditioning efakwe kahle phakathi nezinyanga ezishisayo kanye nokufudumeza umthombo womoya phakathi nezinyanga zasebusika.Kukhona i-smart TV. Siphinde sibe nesaluni yobuhle eseceleni ehlinzeka ngokwelashwa kokubili kwabesifazane nabesilisa.I-annexe ifanele abantu abadala abangu-2 futhi ingakwazi futhi ukuhlalisa izingane ezi-2 ezengeziwe phezu kombhede wosofa.Izohlalisa abantu abadala abangu-4 uma ungenankinga nokwabelana ngemibhede futhi bonke basendaweni eyodwa.
SICELA UQAPHELE IKITCHENETTE AYINAYO ISISHISHI NOMA IHOB. INE-TOASTER, IKETTLE, UMSHINI WEKHOFU KANYE NE-MICROWAVE.
4.86 · 191 okushiwo abanye
Indawo enhle ethule enendawo eningi evulekile ezungezile. Isikhungo sedolobha iThatcham siwuhambo olufushane futhi sinikezela ngamabhange, izindawo zokudlela, izindawo zobumnandi nezitolo ezinkulu.Kukhona namajimu asendaweni asebenza njengeholo njengoba uhamba. Idolobha laseNewbury liyibanga elifushane ukusuka endaweni njengoba kuyisifundo somjaho saseNewbury.Indawo enhle emaphakathi yokuphuma nokuzulazula, njenge-stone henge ne-highclere castle
Singasiza nganoma yiluphi ulwazi lwendawo futhi sinikeze izinhlobonhlobo zokwelapha zobuhle endaweni.I-annexe izoba nezinto ezibalulekile ukuze wenze ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana. Futhi singahlinzeka ngezidingo zezingane ezinjengokugeza, isihlalo esinyakazayo, amathoyizi njll.
Singasiza nganoma yiluphi ulwazi lwendawo futhi sinikeze izinhlobonhlobo zokwelapha zobuhle endaweni.I-annexe izoba nezinto ezibalulekile ukuze wenze ukuhlala kwakho kukhululeke ka…
Hlola ezinye izinketho ezise- Thatcham namaphethelo